एमाले केन्द्रीय सदस्यमा को-को भए निर्विरोध ? सूचिसहित — SuchanaKendra.Com
चितवन । नेकपा एमालेको ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनले पेश गरेको सूचीमा नभएकाहरुले समेत उम्मेदवारी दिएका कारण धेरैमा निर्विरोध हुन सकेन ।
अध्यक्षमा ओलीसँग भीम रावलको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्ष र सचिवमा पनि निर्वाचन हुने भएको छ । ६ उपाध्यक्षका लागि ७ र ७ सचिवका लागि ९ जनाको उम्मेदवारी परेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्वारोध निर्वाचित भएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुमा पनि केही निर्विरोध भएका छन् । खुला, आदिवासी जनजाति लगायतका धेरै उम्मेवार परेको ठाउँमा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । सकेसम्म पदाधिकारीमा मात्र चुनाव गर्ने प्रयास हुने एक नेताले बताए ।
उम्मेदवारी दर्ताकै आधारमा कोको भए निर्विरोध ?
मधेसी महिला : कमलादेवी महतो, जुलीकुमारी महतो, ज्वालाकुमारी साह, रितादेवी साह, शिला यादव र सरिता गिरी यादव ।
मुस्लिम महिला : साजिदा खातुन सिद्धिकी ।
दलित महिला : विष्णुमाया विक, रामरति देवी राम, शिवकुमारी गोतामे र सबिता रसाईली
पिछडिएको क्षेत्र महिला : बद्मीकुमारी बोहरा ।
महिला : विनाकुमारी श्रेष्ठ
खुला : नरेन्द्र श्रेष्ठ
महिला : उषाकला राई, निरा खनाल र मेनुका काफ्ले
खुला : अरविन्दकुमार सिंह, उपेन्द्र साह, प्रभु साह, राजकुमार लेखी, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल
महिला : कल्पनाकुमारी कटुवाल, रञ्जना सरकार र रेखाकुमारी झा
महिला : पार्वती रावल, पेम्बा लामा र रचना खड्का
खुला : इन्द्रलाल सापकोटा, जगत विश्वकर्मा, टुकराज सिग्देल, तिलबहादुर महत, भूपेन्द्रबहादुर थापा र मायानाथ अधिकारी
महिला : नरदेवी पुन, मिनाकुमारी गुरुङ र सीमाकुमारी क्षेत्री
खुला : खेममान खड्का, दिनेश पन्थी, नविन रोका, भूमिश्वर ढकाल, लीला गिरी र हरि रिजाल
महिला : मेनुका पोखरेल, सरिता खनाल र साबित्रा अर्याल